Okusanda kulungiswa. Ukuhlehliswa Okuhle! - I-Airbnb
Okusanda kulungiswa. Ukuhlehliswa Okuhle!
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Stacy
U-Stacy Ungumbungazi ovelele
Okusanda kulungiswa. I-Gorgeous Retreat w/ukubukwa kwempophoma yesizini!
*Leli khaya linama-TV wesikrini esikhulu esiyisicaba eLiving Room kanye nawo Womabili ama-BDRMS.Wonke amakhabethe asekhishini amasha, Isiqandisi Side by Side esine-Ice Maker, Isitofu sikagesi, iMicrowave, futhi sihlanganisa Umshini wokuwasha izitsha, ibhodwe lekhofi le-Keurig, ibhodwe lekhofi elivamile elingu-12 c.Isitezi Esisha siphumela ngaphandle, kanye Nefenisha entsha. Nethezeka ngaseziko likagesi ngaphakathi noma endaweni yokucima umlilo engemuva. AKUKHO UKUBHEMA Eyunithi
Amawindi amasha azayo ngo-2021.
Ubuncane bokuhlala ubusuku obungu-2
• UKUSETSHENZISWA KWAMAHHALA KWEKLABU YOMNIKAZI
* Ukufakwa okuncane kokhiye. Umnikazi uzonikeza isivakashi ukufinyelela kwaso amaphinikhodi angu-4 ukuze singene emnyango ongaphambili.
*Wonke ama-TV"S ama-Smart TV's. Unekhono lokungena ngemvume ku-NETFLIX acct yakho.
*KUFANELE UBE NENDAWO YOKUPAKISHA ILENGA ESIBUKINI SAKHO ESIBUKA NGEMUVA UMA UPAKELA NOMA YIKUPHI EZINGENI OKUNGANJALO, UKUVIKELA KUZOKHIPHA INhlawulo engu-$100 ..
*ABSOLUTLEY AKUGWAMI EKHAYA. UMA KUNENUKO LIKAGARETHI, USIGA, NOMA INSANGU KUZOBA INHLAWULO KA-$100.
YIYIPHI AMAKHADI Ommeleli ELAHLEKILEYO AZOBELEKELA EZIMALINI ZAMA-$50 NGEKHADI NGALINYE...
Amakhadi okusondela ayisithupha (6) ayatholakala endlini ukuze izivakashi ziwasebenzise ukuze zithole ukufinyelela ku-Owner's Club etholakala kuhambo olufushane lwemizuzu engu-2-3 ukuya khona.Kuhlanganisa isikhungo sokufaneleka esigcwele esinempahla yesitayela se-Nautilus, ichibi lokubhukuda elilingana ne-Olympic elingaphakathi elinempambu efinyelelekayo, indawo yokubhukuda yangaphandle, inkundla ye-basketball engaphakathi (hhayi usayizi wemithetho), kanye negumbi legeyimu elinamatafula okubhukuda, amatafula e-ping-pong, i-TV, kanye nemidlalo yevidiyo.Ungaphinda ubhalisele ukusebenzisa enye yezinkantolo zethenisi ezimbalwa noma udlale endaweni enhle yegalofu enezimbobo ezingama-63.IBusiness Centre inikeza iziteshi zamakhompiyutha ezintathu ezinokufinyelela ku-inthanethi. Kukhona nebha yekhompuyutha etholakala ngaphandle kweBusiness Center, kanye nayo yonke le nkimbinkimbi inikeza uxhumano lwe-inthanethi olungenantambo lwamahhala.
• I-GALENA TERRITORY
I-Galena Territory iyindawo yangasese, yokuhlala, yezokungcebeleka neyokungcebeleka etholakala ekhoneni elisenyakatho-mpumalanga ye-Illinois, eduze nedolobha lomlando laseGalena.Le ndawo inamahektha ayi-6,800 we-vistas emangalisayo, izigodi, amathafa kanye nehlathi. I-Territory ibekele eceleni amahektha ayi-1,500 omhlaba wokungcebeleka ovikelekile.Okusele kugcwele ukuthuthukiswa kwezindawo zokuhlala ezinabantu abaningi kanye ne-Eagle Ridge Resort & Spa. I-Galena Territory yaqokwa njenge-Community Wildlife Habitat™ yi-National Wildlife Federation ngo-2010.Kunamahektha ayi-1,900 ezinto zokungcebeleka kanye neLake Galena lokuhamba ngesikebhe nokudoba.
Uma uthanda ukuhamba, kukhona cishe amamayela angu-24 wemizila khona kanye endaweni yase-Galena Territory.Ezinye zazo zikhuphukela emagqumeni futhi ziholela ekubukeni kwesitezi sezinkuni ezinokubukwa okuhle.Abanye baya ngasemanzini eLake Galena.
Imisebenzi yase-Galena Territory ihlanganisa uku-zip kumakhanopi e-The Galena Territory esifundweni esisha somugqa we-zip we-Long Hollow Canopy Tour, noma ukugibela ihhashi ngokukhululekile e-Shenandoah Riding Center.Noma jabulela izimbobo ezingu-63 zegalofu eliwumpetha kanye nezindawo zokudlela eziwine imiklomelo e-Eagle Ridge Resort & Spa.
Udinga izinga elilandelayo lokuphumula, ungenza i-aphoyintimenti e-Stone-drift Spa etholakala esakhiweni esikhulu se-Eagle Ridge Resort.Isikhungo sezinyawo ezingu-6,000-square foot sinezitifiketi zochwepheshe be-spa abanolwazi kanye namagumbi okwelapha angu-10 lapho ukwelapha kuhlanganisa ukubhucungwa kwabashadikazi, ubuso, kanye ne-reflexology, ukwelapha amandla, izinsiza zentsha nezabesilisa.Amakamelo okukhiya amadoda nabesifazane nawo anamakamelo asezingeni eliphezulu. Igumbi lokuphumula liyindawo enhle yokuphumula ngenkathi usalinde ukwelashwa futhi i-Spa Boutique inikeza imikhiqizo ye-deluxe yemvelo ongayithenga engasetshenziswa ngesikhathi sokwelashwa kwakho.
• Ichibi Galena & MARINA
Enye yezinsiza ezithandwa kakhulu yi-Galena Territory yiLake Galena, ichibi elihle elenziwe umuntu elingamahektha angu-225 elilungele abadobi nabahamba ngezikebhe abajabulela ukubuka imvelo ohambweni lokungcebeleka.Iziqhenya ngokudoba okuhle kakhulu endaweni, ngobuningi be-bass yomlomo omncane kanye nomlomo omkhulu, i-walleye, i-bluegill, i-catfish yesiteshi, i-perch ne-tiger muskie.
Ugu lolwandle luqokwe i-Green-space - umhlaba ophethwe ngokuhlanganyela amalungu e-The Galena Territory Association - ongeke uthengwe noma uthuthukiswe.Ukuze kuvikelwe usebe lolwandle ekugugulekeni futhi kugcinwe ichibi lithule, linokuthula futhi likhanga izilwane zasendle, leli chibi lilinganiselwe kumamotho anamandla amahhashi angu-10.Akukho ukubhukuda noma ukushushuluza emanzini.
Ezinye izindawo ezimbili ezikhethekile eLake Galena yiNorth Cove neThunder Bay Falls Park.I-North Cove ihlanganisa indawo yepikiniki, inkundla encane kanye nama-barbecue grills. I-Thunder Bay Falls Park iseduze kwendlela yokuchitheka kweLake Galena kanye nedamu.Izindlela zokuhamba izintaba ziyatholakala futhi ukudoba kuvunyelwe emfudlaneni ongaphansi komgwaqo ochithekile. Izindlela ezimbili zinqamula phezulu kanye nesisekelo sodonga olugcina i-limestone olungamafidi angu-17 ubude no-400-ubude oluholela endaweni yokubuka edumile yokubuka indlela yokuchitheka kweLake Galena.
I-Marina ye-Galena Territory Association itholakala ku-Marina Drive futhi ihlinzeka ngokuqasha izikebhe futhi idayise amalayisense kaphethiloli nawokudoba.I-Marina inesitolo esigcwele kahle se-Bait & Tackle Shop sabadobi abadinga isiyengo esibukhoma, izinsimbi ezengeziwe, ama-bobber noma mhlawumbe induku entsha ne-reel, futhi ithengisa i-pop, amanzi asebhodleleni, ama-chips, ukudla okulula kanye no-ayisikhilimu.Isitolo sivulwa ngo-Ephreli kuya ku-Okthoba.
Ogwini lweLake Galena, eduze kwaseMarina, uzothola inqwaba yamathuba okuzijabulisa amalungu omndeni ayo yonke iminyaka ukuze ajabulele okuhlanganisa inkundla yokudlala, indawo yepikiniki, ishede lokuhlanza izinhlanzi kanye nezinkantolo ezintathu zebhola lokugquma, ithenisi. izinkantolo ze-volleyball.Amanye amathuba okuzilibazisa esizini ahlanganisa inetha le-badminton kanye nemigodi emibili yezicathulo zamahhashi.
• DOWNTOWN GALENA YOMLANDO
Indlu icishe ibe yimizuzu eyi-10 ukuya eGalena yomlando wedolobha.Leli dolobhana elinesitayela saseNew England lisanda kukala #1 ngo-2017 yi-Architectural Digest ye-“Most Main Main Street in America”.Iphinde yafakwa ohlwini “lweDolobha Elihle Kakhulu LaseMelika” yiForbes Magazine ngo-2013.Uzoyithanda indawo yedolobha exakile, engamamayela ubude enezitolo zezipho ezihlukile, izindawo zobumnandi zika-ayisikhilimu, izindawo zemibukiso yamaciko, izitolo zemisebenzi yezandla, izitolo zokudla okukhethekile, nezindawo zokudlela.Kukhona nezivini eziningi ongazihlola ngaphandle kwe-Galena. Bona iwebhusayithi ethi "Vakashela i-Galena" ukuze uthole ulwazi oluningiliziwe olufaka ikhalenda lemicimbi.
E-Galena, kunezinketho eziningi kusukela ezindaweni zamabhega esitayela se-pub kuya endaweni yokudlela ephezulu.Enye yezintandokazi zethu indawo yokudlela yesi-French/German ebizwa ngokuthi i-Fritz and Fritters. Inesinye seziteki ezinhle kakhulu esike saba nazo.I-Log Cabin yaziwa ngama-steaks amakhulu futhi (nakuba ngamanani aphezulu). I-One Eleven Main iyindawo yokudlela enhle eyenza izitsha zabo ngokudla okuvela kubalimi bendawo.AbakwaDurty Gurt baziwa ngamabhega abo. Uma ungafuni ukushiya i-resort, kunezindawo zokudlela ezine emagcekeni.Indawo yokudlela yase-Woodlands e-Eagle Ridge Resort & Spa inesidlo sasekuseni esihle kanye nombono omangalisayo ovela ku-bluff ebheke eLake Galena.Sithanda kakhulu ama-Eggs Benedict avela kumenyu. Kukhona indawo yokudlela eseduze yesitayela se-pub enebha kanye ne-TV yesikrini esikhulu uma ufuna ukubamba umdlalo.I-Paisano inikeza amasemishi e-pizza nama-Italian. Kukhona enye indawo yokudlela eduze nomnyango weGalena Territory ebizwa ngokuthi i-Woodstone enamafasitela ezindaba ezingu-2 1/2 abheke umbono omuhle wesigodi.
• IMISEBENZI YASEBUSIKA
Ukusebenza ngesikhathi sasebusika kufaka phakathi ukushushuluza e-Chestnut Mountain eqhele ngamamayela ayi-15. Khona kanye emagcekeni, ungakwazi ukuwela izwe eqhweni, skate eqhweni echibini, noma sledding emagqumeni amaningi.Ungakwazi ukuqasha okokusebenza kwalokhu eNordic Center, eseduze nebanga lokuhamba ekhaya.Ungase futhi ufune ukuya edolobheni laseGalena ebusuku ukuze ubone izibani zikaKhisimusi.
Cishe ngeviki lesi-2 likaDisemba, u-Galena unomcimbi obizwa ngokuthi Ubusuku Be-Luminaria kanye ne-Living Windows.Idolobhana libeka izibani ezikhanyiswe ngamakhandlela ezingaphezu kuka-5,000 ezikleliswe emigwaqweni ezungeze idolobha futhi izitolo eziningi ezisedolobheni zihlobisa amafasitela azo ngezigcawu zikaKhisimusi futhi bukhoma abantu abalingisa abalingisi abahlukene.
4.98 · 117 okushiwo abanye
I-Galena inokuningi okuhlinzeka ngezakhiwo zakudala zomlando ezinokuthenga, izindawo zokudlela, imigoqo. I-Galena Territitories inikeza i-Marina, amachibi angaphakathi/angaphandle, i-basketball yangaphakathi, igumbi legeyimu elinamatafula okubhukuda ne-ping-pong, izindlela zokuhamba, ibhola le-volley, izinkundla zethenisi, nokunye okuningi! Konke kufakwe nokuhlala kwakho!
Sihlala imizuzu engu-45 kuphela ukusuka lapho. Angafona nanoma yiziphi izinkinga ezingase ziphakame. Sinenkampani yokwakha yasendaweni edolobheni futhi sinenye indawo ku-Territories ebesiyiqashisa iminyaka embalwa!
UStacy Ungumbungazi ovelele